Abaxhasi beCalcium Carbonate kunye neFektri - China Abavelisi beCalcium Carbonate
I-calcium carbonate ebengezela kakhulu icutshungulwa ukusuka kubunyulu bendalo. Icandelo eliphambili yiCaCO3. Inezakhiwo zeekhemikhali ezizinzileyo, eziphantse zanyibilika emanzini, ubumbano lwekristale, umphezulu ogudileyo, ubungakanani beesuntswana ezifanayo, ukusebenza kakuhle kokusebenza, kunye nokufunxwa kweoyile kwe-DOP.
I-nano calcium carbonate ilungiswe ngendlela ye-carbonization esele ikhulile kwaye ihambile, enezibonelelo zokuxinana okuphantsi, ubunyulu obuphezulu, ukusasazeka okuhle kunye nerheology ephezulu.
Isetyenziswa ngokubanzi ekugcwaliseni okusebenzayo kwirabha, iiplastikhi, ukutyabeka, ii-inki, njl. ukusebenza kwepolymer.
Le mveliso isebenzisa i-calcite ekumgangatho ophezulu njengempahla eluhlaza, kwaye yenziwa ngeendlela zeekhemikhali ezinezixhobo zemveliso eziphambili kunye neefomula ezizodwa. Umhlophe omhlophe, awunambitheki kwaye awunamphunga. Emva konyango olusebenzayo, ukuhanjiswa kobungakanani bamasuntswana kuyunifom kunye ne-hydrophobic ephezulu. Ubumanzi obulungileyo, i-gloss elungileyo, kunye nomthamo omkhulu wokugcwalisa. Inokunciphisa ukunxiba koomatshini bokulungisa, ukuphucula itekhnoloji yokuqhubekeka kwemveliso, ukuphucula ukusebenza kwemveliso, kunye nefuthe elingcono lokuqinisa.
I-calcium carbonate enzima iqhutyelwa kwi-calcite yendalo ephezulu. Icandelo eliphambili yiCaCO3. Inezakhiwo zeekhemikhali ezizinzileyo, eziphantse zanyibilika emanzini, ubumbano lwekristale, umphezulu ogudileyo, ubungakanani beesuntswana ezifanayo, ukusebenza kakuhle kokusebenza, kunye nokufunxwa kweoyile kwe-DOP. I-calcium carbonate enzima eyenziwe yasebenza emva konyango olusebenzayo, utshintsho kulwakhiwo lweemolekyuli, ukuhanjiswa kobungakanani bamasuntswana kuyunifomu, kwaye yi-hydrophobic egqithisileyo. Ubumanzi obulungileyo, i-gloss elungileyo, kunye nomthamo omkhulu wokugcwalisa. Inokunciphisa ukunxiba koomatshini bokulungisa, ukuphucula itekhnoloji yokuqhubekeka kwemveliso, ukuphucula ukusebenza kwemveliso, kunye nefuthe elingcono lokuqinisa.
Le mveliso isebenzisa i-calcite ekumgangatho ophezulu njengempahla eluhlaza, kwaye yenziwa ngeendlela zeekhemikhali ezinezixhobo zemveliso eziphambili kunye neefomula ezizodwa. Umhlophe omhlophe, awunambitheki kwaye awunamphunga. Ukuxinana kwesihlobo yi-2.71. Ibola ngo-825 ～ 896.6 ℃ kwaye ibole iye kwi-calcium oxide kunye nekhabhon diokside malunga ne-825 ℃. Indawo yokunyibilika yi-1339 ° C, kwaye indawo yokunyibilika yi-1289 ° C kwi-10.7 MPa. Kunzima ukunyibilika emanzini kunye notywala. Iyanyibilika kwi-asidi yokunciphisa kwaye ikhupha i-carbon dioxide kwangaxeshanye, ibonisa impendulo eyoyikisayo. Ikwanyibilika kwisisombululo se-ammonium chloride. Phantse ungenakunyibilika emanzini.